WhatsApp dia manova ny fampandrenesana noho ny fiovan'ny nomeraon-telefaona | Androidsis
Nanova ny fampandrenesana ny WhatsApp noho ny fiovan'ny nomeraon-telefaona
Eder Ferreño | | Fampiharana Android, Tutorials, WhatsApp
Rehefa manova ny nomeraon-telefaonanao ianao dia i WhatsApp no ​​miandraikitra ny fampandrenesana ireo olona ifandraisanao aminy. Ny rindranasan'ny fandefasan-kafatra dia manana rafitra hanatanterahana izany. Na dia hiova tsy ho ela aza ity fanamarihana ity izay mamorona ny fangatahana. Hita izany tao amin'ny kinova beta azy. Ny fahatongavan'i a rafitra vaovao hampandre ny fifandraisanao dia tena izy.
WhatsApp dia hanome safidy malalaka bebe kokoa amin'ny mpampiasa rehefa manova ny nomeraon-telefaon'izy ireo misaotra an'ity rafitra vaovao iasan'izy ireo ity. Fiovana tsotra, fa zava-dehibe ho an'ireo mpampiasa ny fampiharana malaza.
Hatramin'izao, rehefa misy manova ny nomeraon-telefaonanyna, ny fampiharana dia niandraikitra ny fandefasana fampandrenesana ho an'ny mpifandray aminao rehetras. Fa tian'ny WhatsApp ny mpampiasa hanana ny teny farany amin'ity lafiny ity. Noho izany dia mampiditra rafitra vaovao izy ireo izay misy safidy maro azo atao.
Amin'ny sary dia afaka mahita ny fomba fiasan'ity fampandrenesana vaovao ity amin'ny fampiharana ianao. Ny mpampiasa dia afaka manapa-kevitra amin'izay olona tiany halefa amin'io fampandrenesana na fampandrenesana io fa nanova ny nomeraon-telefaoniny. Azontsika atao ny mandefa izany any amin'ireo fifandraisana rehetra, amin'ireo olona ifampiresahantsika na misafidy tsirairay ireo mpifandray handefasana io fanovana io.
Noho izany WhatsApp dia mamela ny mpampiasa hanana fahefana manapa-kevitra bebe kokoa ankehitriny misaotra an'ity fanovana ity. Ka ianao no manapa-kevitra hoe iza no handray ity fampandrenesana ity. Safidy ahazoana aina raha misy olona tsy te handray izany amin'ny fomba rehetra.
Ity rafitra vaovao ity dia sedraina amin'ny fampiharana izao. Azo alaina amin'ny endriny beta an'ny WhatsApp izy izao. Na dia amin'izao fotoana izao aza dia tsy fantatra hoe rahoviana no ho tonga amin'ny fomba ofisialy. Manantena izahay fa handre anao tsy ho ela.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » WhatsApp » Nanova ny fampandrenesana ny WhatsApp noho ny fiovan'ny nomeraon-telefaona
Misy zavatra ilaina, sa tsy izany? (mampihomehy)
Ahoana ny fomba hanafoanana ny Bixby amin'ny Samsung Galaxy S9